တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း: ကိုယ်ပိုင် ကြောက်စိတ်မှ အောင်မြင်ခြင်း
To Conquer Fear By Himself
not by angles, or by demons,
heave or hell.
စစ်ပွဲမှာ ရန်သူ တစ်ထောင်ကို အနိုင်ရတာထက်
အဲဒီအချိန်မှာ ရရှိလာတဲ့ အောင်မြင်မှုက
ဘယ်ဘုံ ဘယ်ဌာန ဘယ်နတ်
Inactive breeds doubt and fear.
If you want conquer fear,
မင်းရဲ့ ကြောက်စိတ်တွေ သံသံယတွေ
မရှင်သန်လာအောင် မွေးဖွားဖို့ ကြိုးစားပါ။
ရဲရင့်သော သတ္တိတွေ ယုံကြည်မှုတွေ
ရှင်သန်လာအောင် မွေးဖွားပေးဖို့ ကြိုးစားပါ။
မင်း ကြောက်နေတဲ့ စိတ်ကို
အဲဒီအလုပ်တွေကို အချိန်ပြည့် လုပ်ပါ။
and one of the main source of cruetly.
အခြေခံ ပညာရပ် တစ်ခုသာဖြစ်တယ်။
is the highest human felicity.
ကြည်နူးမှု အရသာ ဖြစ်သည်။
(Peace Pilgrim )
မေတ္တာသည် အရာအားလုံးကို အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 8:46 AM